आस्था रावत पक्राउ , बयान नसकिएपछि आज हिरासतमै ! - VON TV
१३ माघ २०७६, सोमबार १३:५६ 179 ??? ???????
काठमाडौं : गायिका आस्था राउतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाे छ।
अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्धामा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रहरी प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा सुरक्षा जाँचको क्रममा प्रहरी र आस्थाबीच भएको विवादमा प्रकाउ पुर्जी जारी भएपछि उनी प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन्। उनलाई त्यहीबाटै नियन्त्रणमा लिइएको बोगटीले जानकारी दिए।
आस्था कार्यक्रममा सहभागी हुन केही दिन नेपाल बाहिर थिइन्। यसअघि उनलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुमति दिएको थियो। माघ ५ मा गायिका आस्थाविरुद्ध प्रकाउ पुर्जी जारी भएको थियो।
विमानस्थलमा आस्थाले चेकजाँचका क्रममा महिला प्रहरी रमिता श्रेष्ठमाथि ‘अभद्र व्यवहार’ गरेको उजुरी परेको थियो। आस्थाले विमानस्थलमा आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको माघ १ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लाइभ गरेकी थिइन्। त्यसको केहीबेरमा नै उनले भिडियो हटाइन्।
सुरक्षा जाँचका क्रममा गायिका आस्थाको महिला प्रहरी रमिता श्रेष्ठसँग विवाद भएको थियो।
बयान नसकिएपछि आज हिरासतमै !
महानगरिय प्रहरी कार्यलयका प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेलले नेपाल लाइभसँग दिउँसो भनेका थिए, ‘कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर आस्थालाई आजै छाड्ने तयारी छ।’ तर, कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न समय नपुगेको भन्दै प्रहरीले आस्थालाई आजको रात हिरासतमै राख्ने भएको छ।
‘सरकारी वकिलसँगको बयान नसकिएकाले आज आस्था राउत हिरासतमै रहनेछिन्,’ महानगरिय प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदी बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गायिका राउतलाई ४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपनि प्रहरीले आस्थालाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने आशंका गरिएको थियो। तर एसएसपी सुवेदीले बताएअनुसार आस्था आज हिरासतमा रहने पक्का भयो।
अब भोलि मुद्दाको टुंगो लगाएर आस्थालाई छाड्ने तयारी रहेको समेत प्रहरीले बताएको छ।
आस्थालाई दिउँसो काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत म्याद थपका लागि जिल्ला प्रशासनमा उपस्थित गराएको थियो।
राउतले सोमबार बिहान प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेकी थिइन्।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा सुरक्षा जाँचको क्रममा प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठ र आस्थाबीच विवाद भएपछि जवान श्रेष्ठले अभद्र व्यवहारमा उजुरी दिएकी थिइन्।